warkii.com » Irrfan Khan ilaa Sushant: 6-Xidig caan ah oo sanadkaan 2020 qeybtiisa hore geeriyoodeen (+Sawiro)
Irrfan Khan ilaa Sushant: 6-Xidig caan ah oo sanadkaan 2020 qeybtiisa hore geeriyoodeen (+Sawiro)
2020 waa sanad dunida laga yaabay dhacdooyin caan noqdeen ayaana dhaceen sanadkaan qeybtiisa hore oo taariikhda waligeed xusi doonto sida caabuqa Corona oo dilaacay, dilal iyo geeri shaqsiyaad caan ah oo la sheegay iyo waxyaabo badan wadan walbana wax ugaar ah ayuu arkay sanadkaan.
Hadaba Bollywoodka markaan ka hadalno shaqsiyaad badan ayaa ka geeriyoodeen 6-bilood udambeysay waxaana shaqsiyaadkaas ka xuseynaa 6-kamid ah oo xidigo caan ahaayen fadlan hoos kaga bogo:
Irrfan Khan: waxuu ahaa jilaa qaab jiliin u dhameestiran waxaana markuu geeriyooday loo aqoonsaday kii ugu jiiinka fiicnaa 30-sano udambeysay Irrfan waxuu la xanuunsanaa kansar inkastoo uu kasoo kabsaday balse hooyadiis markee geeriyootay maalmo kadib caabuq ayaa kaga dhacay dhanka mindhiciraha isbitaal ayaana la dhigay 29-April ayuua geeriyooday.
Rishi Kapoor: Maalin kadib geerida Irrfan waxaa hadana geeriyooday helyeegii Bollywood Superstar Rishi Kapoor oo isagana kansar kudhacay balse kasoo kabsaday si kastee ahaataba xanuuno kalena wey iska hayeen ugu dambeyn cabur iyo neef-qabatiin ayaa kusoo booday ilaa uu neefsan waayo isbitaal markii la dhigayna 30-April geeridiisa ayaa la xaqiijiyay.
Saroj Khan: waxay ahed macalimad qoobka cayaarka atiriishooyinka barta markee heesaha duubayaan 3-july ayee geeriyootay iyadoo 71-jir ah waxaana kusoo booday wadna xanuun waxaa lagu xusuusan doonaa shaqadii quruxda badneed ilaa beri samaadkii ay Bollywood kasoo qabatay.
Sushant Singh Rajput: Shaqsiyaadka kore dhamaan xanuun ayee u geeriyoodeen balse Sushant meedkiisa waxaa laga helay qolkiisa isagoo xarig ka laad-laada ilaa hadana kiiskiisa lama soo xirin waxaana la kala saari la’yahay in la dilay ama inuu is dilay haduu is dilayna sababtuu isku dilay ayaa la baarayaa maadmaa uusan wax warqad ah reebin 14-June ayuu geeriyooday waana qofka ugu saameynta badnaa geeridiisa sanadkaan.
Wajid Khan: Waxuu ahaa Music-yaqaan caan ah 1-June ayuu geeriyooday xili uu wadna xanuun kusoo booday aad ayaana loo jeclaa Album-yo caan ah ayuuna kasooo shaqeeyay xidigaan.
Mohit Baghel: wiilkan miisaanka culus isago 26-jir ah ayuu geeriyooday sanadkaan maadama uu la xanuunsanaa cudurka Kansarka filimkiisa ugu caansan waa Filimkii Ready ee uu Salman Khan la jilay.